Izindaba - I-New Type Polyquaternium-11 Yethulwe Kakhulu
Uhlobo Olusha Lwe-Polyquaternium-11 Olwethulwe Kahle
Uhlobo Olusha Polyquaternium -11 Ngokukhulu Kwethulwe
I-Polyquaternium-11 yokuhweba ine-approx. 20% yokuqukethwe okuqinile okunesisindo esiphezulu samangqamuzana. Ukuhlangabezana nezidingo zemakethe, sethula iPolyquaternium-11 50%.
I-Polyquaternium-11 ngusawoti we-polymeric quaternary ammonium owenziwe ukusabela kwe-diethyl sulfate kanye ne-copolymer ye-vinyl pyrrolidone ne-dimethyl aminoethylmethacrylate. Kusekilasini lamakhemikhali elaziwa ngokuthi ama-quaternary ammonium compounds (ngokuvamile abizwa nge- “Quat”).
Yifu, ifilimu enombala oyinkanyezi owake waba yi-anti-static agent.Isebenza njenge-conditioning agent ne-film-former, styling ausiliary.Polyquaternium-11 isetshenziswa emikhiqizweni yokunakekelwa kwezinwele njengama-mousses, ama-gel, izifutho zepompo nama-spritzes. Izici ezinjengokubaluleka, ukukhanya nokulawula Kusetshenziswa ekunakekelweni kwezinwele njengama-lotion, ama-mousses, ama-gel, izifutho, ama-shampoo, ekunakekelweni kwesikhumba njengezinsipho, ukushefa igwebu nokugcoba umzimba. Isebenza njengesilungisi nesitayela esisizayo. Izipocesses zePolyquaternium-11 ziyasabalala, ukushaja kwe-electrostatic kanye nezindawo zokuthambisa, kunikeza izinzuzo kufaka phakathi i-lather eqinisiwe, amandla amakhulu, ukuhlangana okumanzi, ukuthamba, ukubamba, ukuzwa okushelelayo nokuzizwa kwesikhumba okusilika.
CNgokuqhathaniswa nohlobo lokuhweba iPolyquaternium-11 (okuqukethwe okungu-20%), iPolyquaternium-11 50% enesisindo esiphansi kakhulu samangqamuzana, ifaneleka kakhulu ekuhlanzeni / ekuhlanzeni ukunakekelwa nasekufuthweni kwemikhiqizo yomkhiqizo.
Ukubukeka Sula kuketshezi oluncane lwe-viscous vis
Okuqukethwe okuqinile 48 ~ 52%
i-pH Value (njengoba injalo) 4.0 ~ 7.0
I-N-Vinylpyrrolidone 0.01% ubukhulu.
I-viscosity (# 3, @ 6rpm, 25 ℃) Ama-cps angama-40,000-100,000
Umbala (APHA) 120 ubuningi.